मन्त्रिपरिषद् विस्तार, को को बने मन्त्रि ? — Imandarmedia.com
मन्त्रिपरिषद् विस्तार, को को बने मन्त्रि ?
एजेन्सी। जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। नेता किशिदा विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको नयाँ नेताको रूपमा भरखरै चुनिएका हुन्। हिरोशिमाका प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवारका ६४ वर्षीय सदस्य किशिदा मृदुभाषी नेताकारूपमा परिचित छन् जसले सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्व गत हप्ता मात्र सम्हालेका छन्।
सोमबारको संसद्को मतदानले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा सहजै अनुमोदन गरेको थियो। सोमबारको अनुमोदनपछि किशिदाले थुप्रै नयाँ अनुहार सहित मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् भने केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुगाको मन्त्रिमण्डलका सदस्य यथावत् राखिएका छन्।
पूर्व सरकारका परराष्ट्रमन्त्री तोसिमित्सु मोटेगी र रक्षामन्त्री नोबोउ किशी यथावत् छन्। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने शुनिची सुजुकीलाई दिइएको छ। त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्मा तीन महिला समावेश गरिएका छन् जसमा किशिदा नेतृत्वको एक समयका प्रतिद्वन्द्वी सेको नोडा पनि छन् जो जापानको घट्दो जन्मदर सम्बोधन गर्ने जिम्मामा मन्त्री नियुक्त भएका थिए।
यो पनि: अमेरिका, रुस, चीन र पाकिस्तानको भित्री तयारी बाहिरिएपछि अफगानिस्तानमा खैलाबैला: अफगानिस्तानमा तालिबान शासन पूर्ण रुपमा स्थापित भइसकेको छ। तालिबानले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो स्थानको लागि अपिल पनि गरेको छ। यही बीच रुसले अफगानिस्तानको अवस्थाबारे निकै महत्वपूर्ण बयान दिएको छ। रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ लावरोभले शनिबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा रुस, अमेरिका, चीन र पाकिस्तान मिलेर अफगानिस्तानको विषयमा काम गरिरहेको बताएका छन्।
लावरोभका अनुसार ४ देश मिलेर अफगानिस्तानमा तालिबानले आफूले यसअघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन र चरमपन्थ फैलिनबाट रोक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सुनिश्चित गर्ने काममा लागेको बताएका छन्। लावरोभले चार देश यस विषयमा एक अर्कासँग सम्पर्कमा रहेको बताउँदै रुस, चीन र पाकिस्तानका प्रतिनिधिले हालै कतार र काबुलको यात्रा गरेर अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति हमिद कारजाइ र अब्दुल्ला अब्दुल्लासँग भेट गरेको बताएका छन्।
यो यात्रा त्यतिबेला भएको थियो जतिबेला अफगानिस्तानको नियन्त्रण तालिबानको हातमा आइसकेको थियो तर तालिबानको अन्तरिम सरकारको गठन भने भएको थिएन। त्यतिबेला यी दुई पूर्व राष्ट्रपति सरकार गठनका लागि बनेको काउन्सिलको नेतृत्वमा थिए। लावरोभले तालिबानको अन्तरिक सरकारले अफगानिस्तानको समाध, धर्म र राजनैतिक शक्तिलाई प्रतिबिम्बित नगर्ने भएकोले ४ देशहरु यस विषयमा सम्पर्कमा रहेको बताएका छन्।
अफगानिस्तानमा तासिलबान २० वर्षपछि पुनः सत्तामा आएको हो। तालिबानले यसअघि १९९६ देखि २००१ को शासनमा उसले जसरी राज गरेको थियो त्यस्तो यस पटक नहुने र यस पटक तालिबान शासन उदार हुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, पछिल्लो समय तालिबानले पुरानै शैलीको शासन सुरु गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्ति गरिएको छ। रुसी विदेशमन्त्रीले भने ‘सबैभन्दा जरुरी यो सुनिश्चित गर्नु हो कि उनीहरुले जे प्रतिबद्धता जनाएका थिए तिनीहरु पूरा गरिउन्। हाम्रो लागि यो पहिलो प्राथमिकता हो।
विदेशमन्त्री लावरोभले राष्ट्रसंघको महासभामा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने निर्णयका विषयमा जो बाइडेनको आलोचना पनि गरे। उनले भने अमेरिका र नाटोले परिणामबारे चिन्ता नगरी आफ्नो सेना फिर्ता बोलाए। उनले अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरुमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बेवास्ता गरेको समेत आरोप लगाए।
लावरोभले आफूहरुले अमेरिका र चीनबीच तनाव बढ्दै गएको देखिरहेको बताउँदै बाइडेन सरकारको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको उद्देश्य चीनको विकास रोक्नु भएको आरोप लगाए। उनले भने ‘ठूला शक्तिहरुबीच सम्मानजनक सम्बन्ध हुनुपर्छ। ठूला शक्तिहरुसँग ठूला जिम्मेवारी पनि हुन्छन्।
पछिल्लो समय अमेरिकाले इरानमाथि फेरि परमाणु वार्ता गर्न दबाब दिइरहेको बताउँदै उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नै अमेरिकालाई परमाणु सम्झौताबाट अलग गरेको स्मरण गराए। उनले भने ‘कसैले पनि भन्न सक्छ कि समय समाप्त हुँदैछ तर वाशिङटनले यस्तो गर्न सक्दैन। यो समाचार विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा तयार पारिएको हो।
ब्याक टु ब्याक चमत्कार गर्दै आएको चीनले अन्ततः रच्यो ईतिहास, अमेरिका ठूलो तनावमा: चीनले उच्च फ्रिक्वेन्सीको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक पल्स उत्पन्न गर्ने नयाँ हाइपरसोनिक हतियार बनाएको छ। यस हतियारले कुनै पनि शहरको सञ्चार र विद्युत् आपूर्ति ठप्प बनाइदिन सक्छ । ब्याक टु ब्याक चमत्कार गर्दै आएको चीनले हतियारमा अत्याधुनिक हतियार बनाएर ईतिहास बनाएका हो ।
यो एक मिसाइल हो जसको रेन्ज ३२ सय किलोमिटरभन्दा बढी छ। यो क्षेप्यास्त्र आवाजभन्दा ६ गुणा बढीको गतिमा उड्न सक्छ। कुनै पनि शहरमाथि रासायनिक विस्फोट गराएर सञ्चार तथा विद्युत् आपूर्ति ठप्प बनाउने क्षमता यससँग छ। बेइजिङको चाइना एकेडमी अफ लोन्च भेहिकल टेक्नोलोजीका अनुसन्धाताहरूका अनुसार, यसले अन्तरिक्षमा तैनाथ अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई झुक्याउन सक्छ ।
टार्गेट एरियामा पुगेपछि क्षेप्यास्त्रमा रासायनिक वि’स्फो’ट हुन्छ। यसले फ्लक्स कम्प्रेसर जेनरेटर भनिने विद्युतीय ऊर्जाप्राप्त चुम्बकलाई कम्प्रेस गरिदिन्छ । यसबाट शक एनर्जी बन्छ र त्यो शक एनर्जी शक्तिशाली इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक पल्समा परिणत हुन्छ। यसले दुई किलोमिटरको दायरामा कुनै पनि कम्युनिकेसन नेटवर्कमा प्रमुख विद्युतीय उपकरणलाई बिगारिदिन सक्छ।
यस ह’तिया’रबाट यु’द्धको दिशा नै परिवर्तन हुन सक्छ । शत्रुलाई आफूमाथि प्र’हार भएको छ भन्ने नै थाहा हुन्न। चीनले देखायो आफ्नो अत्याधुनिक वायुसैन्य हैतियार: चीनले मंगलवार आफ्नो अत्याधुनिक वायुुसैन्य हतियारको प्रदर्शनी गरेको छ। त्यसक्रममा उसले निगरानी गर्ने ड्रोन र शत्रुका विद्युतीय उपकरणलाई जाम गर्ने जेटहरू पनि देखाएको छ । ताइवान, दक्षिण चीन सागर र अन्य क्षेत्रमा तनावको स्थितिमा चीनले यस्तो प्रदर्शन गरेको हो।
दक्षिणतर्फ रहेको तटीय शहर चुहाईमा आयोजित विशाल एयरशोमार्फत बेइजिङले आधुनिक युद्धका लागि आफ्नो सेनालाई अद्यावधिक गराउन खोजेको छ। युद्धको प्रविधि तथा लगानीमा चीन अहिले पनि अमेरिकाभन्दा पछि परेको छ तर उसले त्यस अन्तरलाई घटाउँदै लगेको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रदर्शनीमा चीनको सिंगल इन्जिन जे–१० र जे–२० स्टेल्थ ल’डाकू विमान पनि १३औं चाइना इन्टरनेसनल एभिएसन यान्ड एरोस्पेस एक्जिबिसनमा देखाइएको छ।